कृष्ण लीला की क्यारेक्टर ढिला ? - Jhilko
‘वो करे तो कृष्ण लीला हम करे तो क्यारेक्टर ढीला ।’ यो चल्तीको उखान हो । तर यसको खुद उत्तर हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि दिन सक्तैनन् । कुन कृष्ण लीला हो कुन क्यारेक्टर ढिला हो ? यस्तो लीला र क्यारेक्टर ढीला छुट्याउने मापदण्ड के हो ? यो प्रश्नको समग्र ठोस उत्तर नआउन्जेल यसको बहस पैरवी गर्नु नै वेकार हुन्छ । पहिले लीला र ढीला शब्दको प्रासंगिक परिभाषा आउनु परो अनिमात्र विषय प्रवेश हुनेछ । विषय प्रवेश नभइ यो न्यायिक निरुपण गर्न खोज्नु गोरु पछाडि नारेर गाडा अगाडि कुदाउन खोज्नु जस्तै हो ।
उहिले नै उहिले धेरै नै पहिले सबै यस्ता लीलाहरुले सामाजिक मान्यता पाउने गरेको इतिहास छ । अहिलेको भाकामा क्यारेक्टर ढिला भएपनि त्यसलाई जारी व्यवस्थामार्फत सामाजिक व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । परस्त्री सम्बन्ध भएको सामाजिक ठहर वा पञ्चकृत निर्णय भए सामाजिक दण्ड सजाय बमोजिम जारी तिरे पछि खतवात माफि मिनाहा हुन्थ्यो । तर, यता आएपछि भने यो लिलालाई क्यारेक्टर ढिलाकै रुपमा लिने गरिएको छ । र, त्यस्ता पात्रहरुलाइ कालापानी पु¥याउने चलन चलेको छ । यो चलन भने विलकुल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । प्राकृतिक विषयवस्तुमा अप्राकृतिक न्याय सिद्धान्त लागु गर्नु बेमुनासिव नै हो । निर्जिव अक्षरहरुको खेतीपाती गरेर जैविक क्रियाकर्ममा बाधा अड्चन हाल्नु सोह्रै आना बेमुनासिव हो । जिव वैज्ञानिक आवश्यकतालाई निषेध गर्नु कति अनुचित हो ?
परम्परागत रुपमा कृष्ण लीलाको त धार्मिक सामाजिक मान्यता छँदै थियो । कृष्ण लीलालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्थ्यो । प्राग ऐतिहासिक सामाजिक सिद्दान्त बमोजिम कृष्ण लीला उच्च कोटीको लीला हो । सायद हजार जिब्रा भएको शेषनागले आजसम्म खण्डन नगरेकोले यो लीला आजसम्म पनि अपरम्पार छ । कृष्ण लीला आजसम्म पनि उत्तिकै सम्मान साथ हेरिन्छ । राम लीला जत्तिकै यो लिला आजपनि प्रशंसित छ । यस्ता लीलाहरु आजपनि मञ्चित हुने गरेका छन् । यि लीलाहरुले रोमाञ्चित पनि गर्ने गरेका छन् । लीला साहित्यको सञ्चार आजको विकसित सूचना प्रविधिमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ ।
कृष्ण लीलाको सम्बन्धमा साम्यवादी राजनीतितक साहित्यमा कठोर व्यवस्था छ । कतिपय संकिर्ण कम्युनिष्ट पार्टीहरु (खासगरी भारतका खास जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरु) मा क्यारेक्टर ढीला हुँदा कान छेड्ने प्रचलन थियो । नेपालमा सवारी चलाउँदा नियम उलंघन गरे वापत सवारी चलाउने परिचय पत्र (लाइसेन्स)मा ट्राफिकले प्वाल पारे जस्तै त्यहाँका कार्यकर्ताको कान छेडिने गरिन्थ्यो । कति पटक क्यारेक्टर ढीला भयो त्यति नै पटक सजायस्वरुप कान छेडिन्थ्यो । ति भारतीय कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको कानको प्वाल गनेर कतिपटक क्यारेक्टर ढिला भएको रहेछ भन्ने बुझ्नमा आउँथ्यो ।
हुनतः जतिसुकै कठोर व्यवस्था भएपनि साम्यवादी भाष्यमा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत क्यारेक्टर ढीलालाई पनि सुनपानी छर्किने व्यवस्था छ । यस्तो सुनपानी छर्किएर चोख्याउने उपक्रमलाई साम्यवादी शब्दकोशमा आत्मआलोचना भनिन्छ । जति नै ठूलो महाभारत गल्ति जानेर वा नजानेर गरेको भएपनि आत्मआलोचना गरेपछि खतबात माफि मिनाहा हुन्छ । भारतमा यस्ता क्यारेक्टर ढीलालाइ कानमा प्वाल पारेर माफि मिनाहा दिइन्थ्यो । नेपालकै साम्यवादी आन्दोलनमा कान नछेडे पनि माफी मिनाहा दिने चलन चल्दै आएको इतिहास साक्षी छ ।
नेपाल विविधापूर्ण देश हो । यसर्थ तराइको कृष्ण लीला नेपालका कतिपय स्थानमा क्यारेक्टर ढीला हुन सक्छ । एक प्रदेशमा मनाइने लीला अर्को प्रदेशमा सञ्चारहुँद क्यारेक्टर ढीला हुन्छ । यसर्थ प्रदेश गुना लीला र क्यारेक्टर ढीला अथ्र्याइनु आवश्यक हुन्छ ।
कोशी पूर्व खासगरी लिम्बुवान/खम्बुवानमा कृष्ण लीला त हुँदैन । अन्यत्र व्याख्या गरिने क्यारेक्टर ढिला प्रकरणलाइ पनि सामान्य अर्थमा लिने गरिन्छ । त्यो सामाजिक व्यवस्थामा क्यारेक्टर ढिलाको उस्तो अर्थ हुन्न । केहि समय अगाडिसम्म जारी तिर्ने व्यवस्थामार्फत यसको न्यायिक निरुपण हुन्थ्यो । आजभोली पनि यसलाइ जिव वैज्ञानिक कमजोरी भन्दा बढी ठूलो अर्थमा लिइदैन । यसको उदाहरन, प्रमान महरापूर्वका सभामुखलाइ हेरे काफी हुन्छ । उनको पनि त एकाध लीला क्यारेक्टर ढीला नै भएको सुनिन्छ । उनलाइ कतै क्यारेक्टर ढीलाको अर्थमा लिएको सुनिन्न ।
सात प्रदेशमा करिव–करिव सात प्रकारकै सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था छ । ति व्यवस्था अनुसार जिव वैज्ञानिक आवश्यकतालाइ फरक ढंगले हेरिन्छ । यसर्थ तिनै सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था अनुसार यस्ता लीलालाइ संविधानले दिएको अनुसूचिमा उल्लेखित अधिकार बमोजिम बेग्लाबेग्लै व्याख्या तथा कानूनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यस्तो भएमात्र सबैलाइ न्यायिक समानता होला । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
थप सूचना पाउने आशमा इस्लामिक स्टेटका पूर्वप्रमुख अल बग्दादीकी दिदी टर्कीमा पक्राउ
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल क्याविनेटमै अल्पमतमा !
आगामी अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी र नामको विषय आफू अनुकूल नहुने भएपछि पौडेल झनै छटपटिएका...
राष्ट्रियसभाबाट पारमाणविक विधेयक पारित
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्राविधिक विषय भएको हुनाले समितिमा गहन छलफल...
होटलको १० प्रतिशत आजदेखि खारेज
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) निकट ट्रेड युनियन महासंघको आन्दोलनका...
फेरी भारतीय लडाकू बिमान खस्यो
भारतको राजस्थान राज्यमा पर्ने विकानेर जिल्लामा विमान दुर्घटना भएको रक्षा मन्त्रालयले...